News - Iyada oo horumarka joogtada ah ee teknolojiyadda CNC, warshadaha mashiinnada CNC ee Shiinaha ayaa si tartiib tartiib ah u galay isbeddel
Kala duwanaanta dalabaadka suuqa iyo horumarka joogtada ah ee teknolojiyadda CNC, warshadaha mashiinada CNC ee Shiinaha ayaa si tartiib tartiib ah u galay xilli muhiim ah oo ah fikradaha isbeddelka-hal-abuurka leh, isbeddelada ku yimid keenista iyo baahida suuqa, xawaaraha cusboonaysiinta wax soo saarka iyo dhinacyada kale ee ku saabsan in la keeno isbedel layaableh. Calaamadaha waxaas oo dhami waxay muujinayaan in wareeg cusub oo isku shaandhayn ahi imanayo.
Sidaan wada ogsoonahay, Guangdong wuxuu hada kamid yahay xarumaha ugu waawayn ee soo saarista mashiinada CNC ee wadanka iyo xitaa aduunka. Noocyadaas waxaa ka mid ah mashiinnada dhimbiishada ee CNC, mashiinnada feedhka ee CNC, mashiinnada jarista siligga CNC, xarumaha wax lagu farsameeyo iyo alaabooyin kale. Si kastaba ha noqotee, caqabadaha hoose ee soo galista warshadaha awgood, waxaa jira tiro badan oo soosaarayaal yaryar ah Aqoon isweydaarsiyo yaryar ayaa isku qasan. Si ay ugu tartamaan suuqa, qaar badan oo ka mid ah soosaarayaasha mashiinka CNC ee Guangdong ayaa si ba'an u wada gorgortamaya midba midka kale, laakiin waxay iska indha tirayaan tirada sii kordheysa ee soo saareyaasha mashiinnada CNC ee gobollada kale. Waqtigan xaadirka ah, faa iidada tirada ee soosaarayaasha mashiinka CNC ee Guangdong ayaa ah mid aan muuqan. Jinan oo ku sugan Shandong, Anhui oo ku yaal Nanjing, iyo Beijing oo ku taal Hebei Soo ifbixidda soosaarayaasha mashiinnada lambar xakamaynta ee gobolka ayaa si lama filaan ah u qabatay soosaarayaasha mashiinnada xakamaynta tirada Guangdong. Iyo sida wadamada horumaray ee Yurub iyo Ameerika ay dib ugu soo noqdeen wax soo saar, tiro badan oo soosaarayaal tartan badan leh ayaa soo bixi doona.
Fikradaha hal-abuurka ah iyo xawaaraha cusboonaysiinta wax soo saarka ayaa ah xoog muhiim u ah horumarka muddada fog ee shirkadda. Si kastaba ha noqotee, tani waxay u baahan tahay taageero farsamo iyo mid dhaqaale oo xoog leh. Warshadaha mashiinada CNC waxay leeyihiin taariikh dhowr iyo toban sano ah laga soo bilaabo soo bixitaankeedii ilaa biseylkeedii. Suuqa hadda jira iyo qaabeynta Waxqabadka macaamiisha iyo isku halaynta tayada ayaa leh shuruudo sare, looma isticmaali karo oo keliya in lagu daboolo baahida macaamiisha. Soosaarayaasha waawayn ee horey usameeyay magac weyn, sida ay naftooda ugu dhegaan uguna hogaamiyaan horumarka warshadaha ayaa fure u noqotay. Maaddaama dalabka suuqa isbeddelayo, shuruudaha howlaha wax soo saarka iyo waxqabadka sidoo kale waxay noqonayaan kuwo takhasus leh oo heer sare ah.
Taxanaha alaabada sida mashiinka CNC EDM, mashiinka feedhka ee CNC, mashiinka jarista siligga CNC, xarunta wax lagu iibiyo iyo alaabada kale ee ay iibiso Dongguan Bica ayaa had iyo jeer ka dhex muuqda suuqa sababo la xiriira faa'iidooyinkooda shaqooyinka badan iyo waxqabadka qiimaha badan. Tallaabada xigta waa in isku shaandheyn lagu sameeyo warshadaha. Sida mashiin xakamaynta lambar (CNC) iyo shirkad qalab, Dongguan City BiGa Mashiinka Mashiinka Mashiinka CO., LTD. waxay ku tiirsanaan doontaa shirkada cilmi baarista iyo awoodaha horumarineed iyo awooda farsamo si loo balaadhiyo meelo badan oo suuqa ah.
Mashiinka Mashiinka Mashiinka Dusha sare, Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Dusha Sare, Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Hal-Dhamaystiran, Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Lagu Dhufto Double-End, Nooca Gawaarida Mashiinka Mashiinka, Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Cagaaran,